Zụlite Ihe Bus Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Zụlite Ihe Bus Na Europe
Zụlite Ihe Bus Na Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 31/03/2021)
N'ime awa ole na ole, ị nwere ike ịgagharị a ìgwè egbuke egbuke ma na sparkly ọhụrụ mba. ma, ihe bụ ụzọ kasị mma na-e. Zụlite vesos Bus na Europe mgbe ejegharị ejegharị?
Ọsọ ọsọ na mma-achọ!
ụgbọ oloko, n'adịghị ụgbọ ala, njem ogologo site obodo. Nke a pụtara na kama akasiakde ke a na-agwụ ike okporo ụzọ, ma ọ bụ ọtụtụ awa nanị na-akwagharị si n'otu ebe gaa n'ebe, i nwere ohere ahụ ihe nke ị họọrọ mba. Ozugbo ị bụ njikere ime jidesie gị ọzọ ebe, ị ga-esi n'ebe ahụ n'oge na-adịghị. Oke ọsọ Zụlite vesos Bus na Europe. Ọ bụ a dịghị-brainer.
Frankfurt na Cologne Ụgbọ oloko
Dresden na Cologne Ụgbọ oloko
Munich na Cologne Ụgbọ oloko
Ọ dịghị jams
Site na 'ọ dịghị jams', anyị adịghị pụtara na 'ọ dịghị sweet gafere'. Anyị pụtara dịghị mgbochi okporo ụzọ. Nke ahụ bụ ihe banyere ụgbọ okporo ígwè tracks - ọ dịghị ihe igbochi ụzọ. Ha na-a ogologo akara ikike ị na-aga.
Tours na Paris Ụgbọ oloko
Bus oche ndị denser karịa ụgbọ okporo ígwè oche
Nkasi obi nke Train vesos Bus
Mgbe ọ na-abịa na-eme njem ụgbọ okporo ígwè vesos ụgbọ ala. Nkasi obi bụ eze. Mgbe ị na-ekpebi n'etiti Train vesos Bus na Europe, Ụgbọ oloko merie bụghị nanị na-aga ma na-n'etiti, oke! Na n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ị nwere ike echere gị ụgbọ okporo ígwè na nkasi obi na obi nchekwa, na ọtụtụ nke ebe-anọdụ ala, eri ihe, na-aṅụ ma ọ bụ ahịa na njem gị.
On a Bus, ị ịkọrọ a nta ohere (na a nta mposi!) na ọzọ njem. Ị ga-enwe ike iji nweta elu na gbatịa gị ụkwụ ma ọ bụ kwaga a were dị jụụ e ji ebu ihe, na nwere ike ghara ịdị ya nri ọ bụla ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ dị.
Train oche bụ ihe ọma karịa ụgbọ ala oche
Mgbanwe nke mgbanwe nke ụgbọ oloko na Bus
on a Train njem, ọkwa ga-enye zuru ezu elu-ụbọchị ozi na gị ụgbọ okporo, site na mgbe ọ na-ebe ọ na-akwụsị na nke n'elu ikpo okwu na ọ departs si, na ọ bụrụ na ị chọrọ tụnyere ụgbọ okporo ígwè vesos ụgbọ ala na mgbanwe, mgbe ahụ, na ụgbọ okporo ígwè, ị maara na 90% ziri ezi mgbe ị ga na-abata.
A ụgbọ ala ga-ị si A na B, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịga n'ihu, ị ga na-agba ọsọ n'ime oké ọnụ nsogbu. Na-ejighị n'aka na-egbu oge mere site na okporo ụzọ na okporo ụzọ pụrụ ịpụta efu njikọ gị, na-efu gị a otutu ihe.
On a Train, ị nwere ngụkọta mgbanwe; dị nnọọ pụta na-awụlikwa elu na bụla na-akụziri ona gị atụmatụ.
Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-atụ uche gị ụgbọ okporo ígwè - ị nwere ike dị hop na-esote onye!
Ị kwenyere na Zụlite vesos Bus na Europe na-arụrịta ụka, ma?
gaa na, akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè eme njem na Save A Train. Na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ohere onboard ụgbọ okporo, ị ga-enwe ohere na-anọdụ ala azụ, zuru ike na-enwe mma mgbe ị na-eme atụmatụ gị ọzọ aga.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-versus-bus%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / ru na / de ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#bustravel Bus europetravel longtrainjourneys TrainStation ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel TrainVSBus traveltips
10 Amazingly Stunning squares Na Europe
Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Britain, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ njem Russia, Train Travel UK, Travel Europe
Gịnị Bụ Ihe kacha mfe Mode Of Travel Na Europe?
Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe
Best wineries Na Europe na otú Nweta E
Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Travel Europe